» भर्खरै विवाह बन्धनमा बाधिएका रमेश प्रसाईं को गर्जन,शृङ्खला खतिवडा को डिजाइन मा मन्त्रीको साथ सहयोग र काम ! हेर्नुहोस भिडियो…. भर्खरै विवाह बन्धनमा बाधिएका रमेश प्रसाईं को गर्जन,शृङ्खला खतिवडा को डिजाइन मा मन्त्रीको साथ सहयोग र काम ! हेर्नुहोस भिडियो…. – हाम्रो खबर
भर्खरै विवाह बन्धनमा बाधिएका रमेश प्रसाईं को गर्जन,शृङ्खला खतिवडा को डिजाइन मा मन्त्रीको साथ सहयोग र काम ! हेर्नुहोस भिडियो….
प्रदेश १ सरकारले गर्यो यस्तो काम शृङ्खला र रमेश प्रसाइले गरे उच्च- सम्मान १ सेयर गरौ भिडियो तल हेर्नुहोला।
रमेशले नन्दा सिंह’संग तीन वर्षदेखि प्रेम रहेको र विवाह गर्न लागेको घोषणा गरेका थिए । उनको घोषणा पछि केही फ्यान’हरु रिसाएका समेत थिए । उनी’हरुले कल्पनालाई रमेशले धो’का दिएको आ’रोप समेत लगाएका थिए । भि’डियो हेर्न तल थिच्नु’होस् ।
उक्त भिडि’योलाई दर्शक:हरुले निकै नै रुचा’एका छ्न । उक्त भिडियो अहिले टिकटकभरी भाइ:रल भ:इरहेको छ । य भिडियोलाई अहिले लाखौं ले हेरिसकेका छन ।
काठमाडौमा रहेका रमेश विवाहका लागि आफ्नो गृहजिल्ला सुनसरीमा (धरान) पुगेका थिए । उनले इटहरीमै नन्दालाई बेहुली बनाएका हुन् ।